साहशी पाइलट जसले अगाडीको दुईवटा चक्का नखुल्दा पनि सकुशल गराए अवतरण (भिडियो सहित) – MediaNP
शनिबार, २२, चैत, २०७६
साहशी पाइलट जसले अगाडीको दुईवटा चक्का नखुल्दा पनि सकुशल गराए अवतरण (भिडियो सहित)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००५:२४0
काठमाडौँ । विमानको दुईवटा चक्का नखुलेपनि म्यान्मारको राष्ट्रिय एयरलाइन्सका एक पाइलटले सकुशल विमान अवतरण गराएर दुनियाँ नै चकित बनाएका छन् । विमान उडाइसकेपछि अगाडीको दुईवटा चक्का नखुलेको कारण उनले अकास्मात रुपमा सुरक्षित विमान अवतरण गराएका हुन् । उनको यति ठूलो साहशको कारण ८९ व्यक्ति सकुशल रहेको एक विमानस्थलका अधिकारीले बताए ।
इम्ब्राएर १९० एएआर विमान यांगोनबाट ८२ यात्रु र सात विमान कर्मचारीलाई लिएर आइपुग्दा दुर्घटना भएको विमान स्थल कर्मचारी ऊ क्या सानले बताए ।उनले भने ‘हामीहरु उद्धार टोली अग्निनियन्त्रक तथा अन्य आपतकालीन कर्मचारीहरुको साथ विमान अवतरणको प्रतिक्षा गरिरहेका थियौँ । हामीविमान पहिला त पछाडीका चक्कामा ओर्लियो त्यसको अगाडी पट्टीको भाग धावनमार्गमा चिप्लियो र रोकियो ।’
विमान यांगोन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहान ८ बजे उडेर माण्डेलेमा बिहान ९ बजे ओर्लिएको थियो । उनले ट्राफिक कन्ट्रोलमाथि दुईपटक विमान उडाए । उनीहरुले अगाडीको चक्का बाहिर निस्केको छ की छैन् भनेर थाहा पाउने वित्तिकै फन्को मारेको थियो । विमानको इन्धन सक्नलको लागि पनि उनले विमान उडाइरहेका थिए । त्यसपछि आकस्मिक अवतरण गराइएको मान्यमार राष्ट्रिय विमानसेवाले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि आफुलाई सम्हालेर यात्रुहरुलाई बचाउने सफल भएको भन्दै पाइलटको प्रशंसा गरेको डा. विन म्यानले बताए ।
दुई पटक फन्को मारेपछि क्याप्टेनले आकस्मिक अवतरण गर्नको बताए । अगाडीको दुई वटा चक्का मध्ये एउटा चक्का मात्रै खुलेको थियो ।
विमान थर्किएको दुईपटक मात्र हामीले थाहा पायौँ र विमानबाछ अलिकति धुवाँ आइरहेको देख्यौँ । त्यसपछि विमान चिप्लाएर हामीले उनीहरुको निर्देशन पालना गर्यौ । विमान २५ सेकेन्डसम्म चिप्लिएको थियो । म्यान्मारको नागरिक उड्यानयन मान्त्रालयले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको थियो । बेलुका मात्रै पनि यांगोन विमानस्थलमा विमान आकस्मिक अवतरण गर्दा २० जना यात्रु घाइते भएका थिए ।
जान्नुहोस् ! अब यी फोनमा चल्दैन् ह्वाट्एप
सावधान ! के तपाई फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ ? बुँदा नं.९४ ख्याल गरेर मात्रै चलाउनुस्